COVID-19 सँग सम्बन्धित हल्लाहरूबाट सावधान रहनुहोस्! दैनिक जीवनमा के कुरामा सचेत रहने | COVID-19 多言語情報ポータル
COVID-19 सँग सम्बन्धित हल्लाहरूबाट सावधान रहनुहोस्! दैनिक जीवनमा के कुरामा सचेत रहने
तपाईंले सुन्नुभएका सबै कुराहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्! – नआत्तिनुहोस्, शान्त रहनुहोस् र सही तरिकाले व्यवहार गर्नुहोस्-
विश्वभरि COVID-19 फैलिएको हुनाले यससँगै डर पनि फैलिएको छ, परिणाम स्वरूप अनियमित हल्ला र भ्रामक जानकारी फैलिएको छ। त्यहाँ छल-कपट गर्न यो सामाजिक दुविधाको फाइदा लिने अपराधीहरू पनि छन्।
यहाँ हाम्रो दैनिक जीवनमा ध्यान दिनुपर्ने केही मुख्य बुँदाहरू छन् जसकारण हामीले मानिसहरूलाई उनीहरूले देखेका वा सुनेका सबै कुराहरूमा अन्धोरूपमा विश्वास गर्न र गैर-जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न र हल्लाहरू फैलाउनबाट रोक्न सक्छौं।
① COVID-19 को कारणले शौचालय पेपर समाप्त हुने छैनन्
महामारीको कारणले शौचालय पेपरको कम हुनेछ भन्ने कुरा बताउँदै इन्टरनेटमा व्यापक हल्ला फैलिएको थियो। यो साँचो होइन।
“Nihon Kateishi Kogyokai” (“जापानको घरेलू पेपर उत्पादन उद्योग एसोसिएसन”) द्वारा खुलासा गरिएको घोषणा अनुसार,) जापानमा उपभोग गरिएका सबै 98% शौचालय पेपर आन्तरिक रूपमा उत्पादन गरिएका छन् र त्यहाँ पर्याप्त आपूर्ति क्षमता र एम्पल स्टकहरू छन्।
साथै, लगभग 16 प्रति महिना चार जनाको परिवारद्वारा प्रयोग गरिएका शौचालय पेपरका रोलहरूको औसत संख्या हो।
यदि हामीले हामीलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी खरिद गर्छौं भने, हामीलाई वास्तवमै तिनीहरूको आवश्यकता हुँदा एउटा पनि खरिद गर्न सक्षम हुने छैनौं। कृपया चिन्ता नलिनुहोस् र त्यहाँ पर्याप्त स्टकहरू छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। शान्तपूर्वक किनमेल गर्नुहोस्। साथै, किनमेल गर्दा, कृपया क्लर्कका निर्देशनहरू सुन्नुहोस् र प्रति-एक ग्राहक नियम जस्ता नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ।
② त्यहाँ कुनै खाद्य कमीहरू हुने छैन
कृषि, बन र माछापालन मन्त्रालयले खाद्य आपूर्तिका सम्बन्धमा, निम्नानुसार घोषणा गरेको छ:
”हामीले पर्याप्त खाद्य आपूर्ति प्राप्त गर्छौं।
खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खला अखण्ड रहन्छ र अझै पनि ठाउँमै रहन्छन्।
त्यहाँ पर्याप्त चामल र पिठोका स्टकहरू पनि छन्।
त्यहाँ आयात गर्नमा कुनै ढिलाई हुँदैन।”
तपाईंलाई आवश्यक भएको कुरा मात्र खरिद गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र खरिद गरेको खाना संचय नगर्नुहोस् वा खरिद गर्न हतार नगर्नुहोस्। साथै, पुन: बिक्रि गर्ने उद्देश्यहरूमा खरिद नगर्नुहोस्।
③ सार्वजनिक प्रशासनले तपाईंलाई निवासीको प्रमाणपत्र रोक्ने व्यक्तिहरूले कुनै पनि लाभहरू प्राप्त गर्दा कुनै पनि कारोबार शुल्कहरू सङ्कलन गर्न वा
ATM को प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दैन, तपाईं 100,000 येन सरकारी नगद ह्यान्डआउटहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ (特別定額給付金; तोकुबेट्सु तेइगाकु क्युफु कीन)। यो लाभको सम्बन्धमा संदिग्ध इमेल र फोन कलका धेरै मामिलाहरूलाई रिपोर्ट गरिएको छ। मानिसहरूलाई पैसा भुक्तान गर्नमा वास्तवमै ट्याक गर्ने मामिलाहरू छन्। लाभको शुल्कमा भएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय (MIC) ले, सर्वसाधारणलाई निम्नानुसार सावधान बनाएको छ:
न MIC ले न त स्थानीय सरकारले सधैँ तपाईंलाई ATM को प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नेछ।
न MIC ले न त स्थानीय सरकारले सधैँ लाभहरूको ग्यारेण्टी दिँदा शुल्कहरूको माग गर्नेछ।
अहिले, न MIC ले न त स्थानीय सरकारले टेलिफन, मेल वा इमेल मार्फत घरका सदस्यहरू वा तपाईंको बैङ्क खाता नम्बर जस्ता व्यक्तिगत जानकारीको लागि अनुरोध गर्नेछ।
तपाईंलाई ”ATM को प्रयोग गर्न” वा ”कारोबार शुल्कहरू भुक्तानी गर्न” वा ”व्यक्तिगत जानकारी दिन” सम्पर्क गरियो वा अनुरोध गरियो भने, यसको बारेमा आफ्नो परिवार वा प्रहरीसँग कुरा गर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाईंले कल केन्द्रमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
उपभोक्ता हटलाइनसँग सम्बन्धित COVID-19 लाभहरू: 0120-213-188
④ अनपेक्षित वस्तुहरू जस्तै मास्कहरूको अप्रत्यासित पार्सलमा सावधान रहनुहोस्। तपाईंले तिनीहरूको लागि भुक्तानी गर्नु पर्दैन।
नोभेल कोरोनाभाइरस फैलिए जस्तै, मास्कहरूको अभाव भइरहेको छ र धेरै मानिसहरू अनलाइन किनमेल गर्छन्। दुर्भावनापूर्ण छल देखाएर यो अवस्थाको फाइदा उठाउने कोही मानिसहरू हुन्छन् जहाँ तिनीहरूले आदेश नदिइएको वा मानिसको घरको ढोकामा खरीद नगरेको र मागको भुक्तानी नगरेकोमा उत्पादनहरू पठाउछन्।
सम्भावित परिदृश्य: तपाईंले मेलमा नष्ट गर्न सकिने 30 मास्कहरूको साथमा खाम प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईंको परिवारको कुनै पनि व्यक्तिले केही पनि किन्ने सम्झिँदैन। अनुहारका मास्कहरूको बिल संलग्न गरिएको छैन। तपाईंले योसँग के गर्नुपर्छ निश्चित हुनुहुन्न।
केही कुरा यो जस्तै हुन्छ भने, सुरुमा शान्त रहन सम्झनुहोस्।
तपाईंको ढोकामा वस्तु आइपुग्नु अघि तपाईंले कम्पनी (a.k.a. वस्तु बेच्ने) बाट फोन कल प्राप्त गर्नुहुन्न भने, यसको अर्थ सम्झौता मान्य छैन। त्यसकारण तपाईंले यसको लागि भुक्तानी गर्नु पर्दैन।
साथै, तपाईंले फोन कल प्राप्त गर्नु हुँदैन भने पनि, तपाईंले खरिद गर्ने वस्तुहरूको निर्दिष्ट सम्झौतामा सहमति नहुँदासम्म, सम्झौता मान्य हुँदैन। त्यसकारण पुन: एकपटक तपाईंले यसको लागि भुक्तानी गर्नु पर्दैन।
तपाईंले अप्रत्यासित वस्तुहरू प्राप्त गरेपछि 14 दिनमा, तपाईंलाई यो फाल्न अनुमति दिइन्छ।
केही कुरा राम्रो महसुस नभएको वा तपाईंलाई चिन्ता लागेको छ भने, तपाईंले मद्दतको लागि 188 उपभोक्ताको हटलाइनमा कल गर्न सक्नुहुन्छ।
⑤ नोभेल कोरोनाभाइरस फैलिएको सम्बन्धमा लुकाएको मास्क र सर्वेक्षणहरूको फिशिङ इमेलहरूमा सावधान रहनुहोस्
फिशिङ वेबसाइट कानून हेर्न डिजाइन गरिएको र व्यक्तिगत जानकारी चोर्न प्रयोग गरिएको नक्कली वेबसाइट हो।
“मास्कहरू बिक्रीमा/ मास्कहरू नि: शुल्क” वा”जानकारी लाभहरू” जस्ता अनुहारका मास्कहरू अभाव र लाभहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा इमेलहरू र टेक्स्टहरू प्राप्त गरेका मानिसहरूको धेरै अवस्थाहरू छन्।
तपाईं यी इमेलहरूमा इम्बेड गरिएको URL पहुँच गर्दा, वास्तविक किनमेलको वेबसाइटहरू वा सोधपूछ फारामहरू जस्तो देखिने फिसिङ वेबसाइटहरूमा तपाईं पुनः निर्दिष्ट हुनु हुनेछ। त्यहाँबाट, तपाईंको नाम, ठेगाना र तपाईंको क्रेडिट कार्ड/नगद कार्डको नम्बरहरू जस्तो व्यक्तिगत जानकारी चोरिएका छन्।
कृपया तपाईं यी नक्कली इमेलहरूले ठगिनु हुन्न भनी सुनिश्चित गर्न निम्न पोइन्टहरूमा सचेत रहनुहोस्।
टेक्स्ट र इमेलहरूमा इम्बेड गरिएको वेबसाइटको लिङ्कहरूमा उत्ताउलोपनाले क्लिक नगर्नुहोस्
औपचारिक संस्था तथा आधिकारिक वेबसाइटहरू जाँच गर्नुहोस् र त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्
तपाईं प्राय: पहुँच हुने बुकमार्क वेबसाइटहरूको लागि, तपाईंको मनपर्ने सूचीमा तिनीहरुलाई बचत गर्नुहोस् र त्यहाँबाट तिनीहरू पहुँच गर्नुहोस्
⑥ शङ्कास्पद फोन कलहरू र घरका आगन्तुकहरूबाट सावधान रहनुहोस्
यहाँ COVID-19 सम्बन्धी हल्लाहरू र पुष्टि भएका घोटाला र अपराधहरूका मामिलाहरू भएका छन्।
निम्न कुराहरू उदाहरणहरूमा समावेश हुन्छन्:
महँगो मास्कहरू र कीटाणुनाशक वस्तुहरू घर-घरसम्म बिक्री गर्ने
तपाईंलाई कुनै व्यक्तिले आफू पलम्बर हो भनी पाइपलाइनमा फेला परेको भाइरसको ट्रेसहरू छन् भनी बताउँदै फोन गर्छ र यसलाई किटाणुमुक्त बनाउन पैसा लाग्छ।
तपाईंलाई शंका लागेका कुराहरू वा सरोकारहरू छन् भने, नजिकैको प्रहरी चौकी वा टोकियो महानगरीय प्रहरी विभाग सामान्य परामर्श केन्द्र (#9110) सँग सधैं सम्पर्कमा रहनुहोस्।
हल्लाहरूले प्रभावित नहुनुहोस् र शान्त भएर काम गरौं!
सबैजना डराएका छन्। यद्यपि, अस्पष्ट जानकारी र प्रौढ आचरणमा दुर्भावनापूर्ण हल्लाहरू कम गर्ने प्रयास सबैले गरौं र शान्तपूर्वक काम गर्ने प्रयास गरौं।
तपाईं अनिश्चित हुनुभएको कुनै पनि कुरा छ भने, आफ्नो परिवार, प्रहरी र सम्पर्क कल केन्द्रहरूमा कुरा गर्न निश्चित गर्नुहोस्।